Ciidamada AMISOM oo ku dhawaaqday hawlgal wado furis ah – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidamada AMISOM oo ku dhawaaqday hawlgal wado furis ah
Ciidamada AMISOM oo ku dhawaaqday hawlgal wado furis ah
March 7, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
AMISOM ayaa ku dhawaaqday hawlgal cusub oo lagu furayo wadada dheer ee xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, oo la rumeysan yahay in ay ku jiraan xoogag ka tirsan Ururka Al-shabaab.
Gaashaanle Sare Wilson Rono ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo Ciidamada Qaranka Soomaaliya ay isku dayayaan in ay dib u furaan wadada weyn ee isku xirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo Baydhabo.
Waxa uu sheegay Al-shabaab in laga saaray magaalooyinka, balse ay xilligan ku soo uruureen inay qaraxyada ku aasaan wadooyinka, balse hada kadib ay u soo jeesteen sidii looga nadiifin lahaa wadooyinka, si ganacsatada ay u isticmaalaan.
Gaashaanle Sare Wilson ayaa intaa ku daray in hawlaha shaqo ay u jooggan dalka ay qayb ka tahay inay furaan wadooyinka, sida ugu dhaqsiyaha badana ay u furi doonaan, isagoo intaa ku daray in wadooyinka ay ciidamo dejinayan.
Hadalka Gen. Wilson ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli xoogaga ururka Al-shabaab ay wadada u galeen kolonyo ka tirsan AMISOM, meel ku dhow degmada Balcad, Jimcihii ina dhaaftay, halkaasi waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray Ciidanka AMISOM.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa marar badan ku celceliyay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM laga doonayo in ay furaan wadadan, balse weli aanay suuragelin oo ay jiraan dhibaatooyin ay wadadaasi kala kulmayaan dadka rayidka ah.
Sawirro:-Madaxweyne Ku Xigeenka Galmudug Oo La Kulmay Bulshada Guriceel
Maamulka Isbitaalka Jaziira oo kawarbixiyay dad ku Sumoobay Hilib kaluun oo la soo gaarsiiyay (Dhageyso)
44,823 total views, 1,773 views today
44,823 total views, 1,773 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,894 total views, 1,772 views today
44,894 total views, 1,772 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,907 total views, 1,771 views today
44,907 total views, 1,771 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,929 total views, 1,771 views today
44,929 total views, 1,771 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
44,964 total views, 1,773 views today
44,964 total views, 1,773 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]